Peptic Ulcer Diagnosis လေနာရောဂါကို ဆေးစစ်ခြင်း - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
အစာအိမ်-လေနာဆိုရင် ဘယ်လိုမျိုး စစ်ဆေးချက်တွေပြုလုပ်ရင် သိနိုင်သလဲကိုပါ။ ဒါမှမဟုတ် ရောဂါက မှန်းဆရတဲ့ အရာမျိုးလား။ စစ်ဆေးရင် အကောင်းဆုံးက ဘယ်လိုစစ်ရမလဲ ဆိုတာတွေကိုပါ ရှင်းပြပေးပါဦး။
(၆) Stool test ဝမ်းထဲမှာ မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ သွေး ပါနေ-မနေစစ်တာ။
2. Peptic Ulcer Diagnosis လေနာရောဂါကို ဆေးစစ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/peptic-ulcer-diagnosis_25.html
3. Peptic ulcer လေနာဆိုတာ ဘုရင်မှာလည်း ဖြစ်သည် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/peptic-ulcer.html